यात्रा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कतार स्थित छ? राज्यको संक्षिप्त विवरण
त्यहाँ मानिस को एक श्रेणी छ जो यात्रा को साथ प्यार मा पागल हो। तिनीहरू निरन्तर हाम्रो ग्रह को नयाँ कुनामा भेट्न कोशिस गर्दैछन्। त्यहाँ एक साँचो स्वर्ग स्थान छ। यो कतार भनिने सानो तर अचम्मको देश हो। स्तर ...
Chundzha तातो स्प्रि --्ग्स - जीवनशक्ति बहाल गर्न एक अद्वितीय स्थान
त्यहाँ कजाखस्तानमा विशाल संख्याका अचम्मका र साँच्चिकै अनौंठो ठाउँहरू छन्, जुन यस देशको भ्रमणको क्रममा निश्चित रूपले हेर्न लायकको छ। यी मध्ये एउटा स्थान चुन्डझाको सानो गाउँ हो। के संग…
अजोकको समुद्र: तट, विशेषताहरू, विशेषताहरू
युरोपको पूर्वी भागमा दक्षिणी युक्रेन, पश्चिमी रसिया र क्रिमियन प्रायद्वीपको उत्तरी भागको बीचको शीतोष्ण महाद्वीप क्षेत्र (स्टेप्पे र वन-स्टेप्पे जोन) मा, अजोभको समुद्र अवस्थित छ। तट, वा बरु यसको केही अंशहरू ...
मियामी, FL: आकर्षण, फोटो। मियामीमा छुट्टियाँ, FL
आज हामी मियामीको सनी शहर (फ्लोरिडा) मा जान्छौं। यो शहर, अमेरिका मा सम्पूर्ण राज्य जस्तै, देश को मुख्य रिसोर्ट क्षेत्र मानिन्छ। आश्चर्यजनक प्रकृति, उत्कृष्ट समुद्र तटहरू, अद्भुत मौसम र समृद्ध इतिहास, ...
मस्कोमा सर्दहरूमा कहाँ हिंड्नु हुन्छ? हिउँको राजधानी कस्तो देखिन्छ? शहरका स्थानहरू र स्थानहरू
धेरै मानिसहरू लगातार मस्कोको मुख्य दृश्यहरू हेर्न राजधानी आउँदछन्। जाडोमा, वर्षको कुनै पनि अन्य समयहरूमा, तपाईं रेड स्क्वायरको प्रख्यात समूहहरू देख्न सक्नुहुन्छ, बोल्शोई थिएटर र अन्य ...
कसरी Salou बाट बार्सिलोनाबाट प्राप्त गर्ने? बालो बार्सिलोना देखि बार्सिलोना सम्मको दूरी के हो र भाडाको मूल्य कति हुनेछ?
सालो स्पेनिश कोस्टा डोराडामा सबैभन्दा लोकप्रिय रिसोर्ट हो। यो परिवारहरूको लागि उपयुक्त छ, साथै एड्रेनालाईन-तिर्खा युवाहरू र रोमान्स प्रेमीहरूका लागि उपयुक्त छ। PortAventura पार्क एक विशाल छ ...
हामी मध्ये केही प्रायः जुनियर सूट जस्ता वाक्यांशमा आएका छौं। यो के हो? तपाईंले जान्नु आवश्यक छ कि यो होटेलहरूमा कोठा कोटिहरूको एक नाम हो। प्रत्येक वर्ष विदेशी देशहरु को लोकप्रियता ...
"हार्मनी अफ द सीज" - संसारमा सब भन्दा ठूलो लाइनर
क्रुज जहाज "हार्मनी अफ द सीज" आज संसारको सबैभन्दा ठूलो जहाज हो। यो ओएसिस-वर्ग विशाल iant 362,12२.१२ मिटर लामो र meters 66 मीटर चौडा छ। यसको उचाई ...
आईसीआरको साथमा नयाँ मस्को मेट्रो योजना: के यो सजिलो हुने छ?
राजधानीमा मेट्रो लगातार परिवर्तन भइरहेको छ। नयाँ स्टेशन र लाइन निर्माण भइरहेको छ। यसले तपाईंलाई सहरका विभिन्न क्षेत्रहरू र उपनगरहरू एकल यातायात नेटवर्कमा मिलाउन अनुमति दिन्छ। मेट्रोले तपाईंलाई द्रुत रूपमा एक क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ ...
छुट्टीको अर्को: विधानमा नयाँ
रूसी संघका सबै कार्यरत नागरिकहरूलाई राज्यको संविधान बमोजिम नियमित बिदाको अधिकार छ। अनिवार्य बिदाको प्रावधानमा मुख्य प्रावधानहरू रूसी संघको श्रम संहिताको धारा ११114-११२ by द्वारा शासित छन्। कला। १२२ ले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ ...
एक्वापार्क "Baryonyx": मूल्य र समीक्षा। काजान "बैरियोनेक्स" मा एक्वापर्क
काजानमा, तपाइँ प्रत्येक स्वाद र बजेटको लागि मनोरन्जन जटिलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। स्थानीयहरू सप्ताहन्तमा कहाँ जान्छन् भन्ने सवालमा लगभग अपरिचित छन्। पूरै परिवारसँग कहाँ जाने भनेर छनौट गर्न धेरै नै गाह्रो छ। मध्येको एउटा…
Schengen भिसाको लागि औठाछापहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ? Schengen भिसा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ नियम: औठाछाप
सेप्टेम्बर १,, २०१ 14 बाट रूसी नागरिकहरूले शेन्जेन भिसाका लागि औठाछाप गर्नु पर्छ। बायोमेट्रिक डाटा सबमिट गर्न सबैका लागि अनिवार्य छ। फिंगरप्रिन्टि cons प्रक्रिया राज्य वाणिज्य दूतावास, अधिकृत भिसा केन्द्रहरूमा गरिन्छ।
अनापा - Vityazevo एयरपोर्ट। फोटो, ठेगाना, दूरी
Vityazevo संघीय महत्व को एक प्रथम श्रेणीको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो, क्रास्नोडार क्षेत्र मा अवस्थित। ठेगाना अनापा शहर मा अवस्थित Vityazevo एयरपोर्ट अनापा रेलवे स्टेशन (वायु परिसर उत्तर-पूर्वमा अवस्थित छ) बाट पाँच किलोमिटर द्वारा अलग गरिएको छ, र बाट ...
Ilmen (पोखरी): मनोरञ्जन, माछा र पर्यटक समीक्षा
पूर्व यूरोपीयन मैदानको उत्तर पश्चिममा पौराणिक र रमणीय ताल Ilmen अवस्थित छ। नोभ्गरोड क्षेत्र, पश्चिमी भाग जसको यो ओगटे छ, स्स्कोभ र टभेर भूमिमा सीमाना र पर्यटकहरू, माछावालाहरू र ...
मल्टीवासा के हो? Schengen Multivisa कसरी प्राप्त गर्ने
व्यक्ति जो प्राय विदेशमा यात्रा गर्छन् केवल मल्टिभिसा भनेको के हो जान्नु पर्छ। यो एक प्रवेश अनुमति कागजात हो कि एक विदेशी राज्य को क्षेत्र को असीमित संख्या को प्रवेश गर्न अधिकार दिन्छ। तथ्यको बावजुद ...
संसारमा सबैभन्दा ठूलो हवाई अड्डा। रूसमा सबैभन्दा ठूलो हवाई अड्डा। यूरोपको सबैभन्दा ठूलो हवाई अड्डा
लामो यात्रामा धेरै उर्जा लिन्छ, त्यसैले व्यक्तिहरू विमान सेवाहरूको सेवामा बढि जान्छ। कुनै यात्रुको लागि परिस्थितिको सामना गर्नु असामान्य कुरा होइन जब उसको विमानमा ढिलाइ हुन्छ। र त्यसपछि एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले ग्राहकलाई खाना,
रोस्तोभोबाट क्रीमियामा कति किलोमिटरको बारेमा कुरा गरौं
रोस्तोवदेखि क्राइमियासम्मको कति किलोमिटरको प्रश्नले यस वर्षको सुरूमा युक्रेनमा अशांत राजनीतिक घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा विशेष प्रासंगिकता प्राप्त गरेको छ। क्रीमियन प्रायद्वीप रूसीमा समावेश गरिएको थियो ...
क्यानेडामा कुन भाषा बोलाइन्छ: अंग्रेजी वा फ्रान्सेली?
क्यानडा उत्तर अमेरिकाको एक राज्य हो जुन विभिन्न संस्कृति र भाषाहरूलाई एकजुट गर्दछ। यसको क्षेत्र अनुसार, देश रूस पछि दोस्रो स्थानमा छ। आधुनिक विश्वमा मुद्दाको सान्दर्भिक प्रत्येक वर्ष, मानिस यहाँ आउँदैनन् ...
बंगलादेश ... यो कुन देश हो? उनी कहाँ अवस्थित छ?
बंगलादेश? यो कुन देश हो? उनी कहाँ छिन्? " - यस प्रकारका प्रश्नहरू प्रायः सुन्न सकिन्छ। यद्यपि भौगोलिक निरक्षरतामा चासो राख्नेहरूलाई दोषी ठहराउन हतार गर्नु पर्दैन। सहमत हुन, यस्तो सानो राज्य को बारे मा तपाईं सक्नुहुन्छ ...
मास्कोमा एक दुल्हन सुइट: अवलोकन, सुविधा र पर्यटकहरूको समीक्षा
विवाह एउटा यस्तो घटना हो जुन ठूलो पैमानेमा मनाइन्छ। यद्यपि, विवाहको दिन मात्र नवविवाहित जोडीको लागि विशेष हुनुपर्दछ, तर विवाहको रात पनि। क्षण गम्भीर, सही राख्न ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 38 अर्को पाना
68 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,685 प्रश्नहरू।